फलानोले गर्दा बिग्रिएको म: बैंकर जोशीको लेख
२०७८ फागुन २६ गते १४:०५ हरिकृष्ण जोशी
एक दिन कार्यकक्षमा काम गरिरहेको बेला फोनको घण्टी बज्यो । मैले उठाएँ । उताबाट प्रश्न आयो कहाँ छस ? मैले अफिसमै छु भनेपछि तँलाई तेरो अफिस भेटन आएँ भन्यो र फोन काट्यो । लगभग...
नारी दिवस (लघुकथा)
२०७८ फागुन २४ गते ११:५० गोपाल खनाल
‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता’ नारा लेखिएको ब्यानर लेखिएको भव्य मञ्चमा कार्यक्रम सुरु भयाे । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री गणेश राई प्रमुख अतिथि भएर कार्यक्रम...
‘पतञ्जलि योग सूत्र’ को नेपाली भाषामा अनुवादित पुस्तक विमोचन
२०७८ फागुन ११ गते १९:०२ विकासन्युज
काठमाडाैं । द आर्ट अफ लिभिङले ‘पतञ्जलि योग सूत्र’ को नेपाली भाषामा अनुवादित पुस्तक विमोचन गरेकाे छ । संस्थाले गुरुदेव रवि शंकरले व्याख्या गरेकाे उक्त पुस्तककाे साेमबार विमाेचन गरेकाे हाे । उक्त व्याख्यामा आधारित अङ्ग्रेजी पुस्तक...
म ‘ए प्लस’ ल्याएर फेल भएको विद्यार्थी !
२०७८ माघ २७ गते १४:१० विकासन्युज
हो ! ठिक सुन्नुभयो । बिल्कुलै ठिक । म ‘ए प्लस’ ल्याएर फेल भएको विद्यार्थी हुँ । मेरो समाजमा ‘ए प्लस’, ‘बि प्लसु, ‘सि प्लस’, ‘डि प्लस’का ठूल्ठूला लक्ष्मण रेखा छन् । मलाई यो...
यो सृष्टि उस्तो हो कि मेरो दृष्टि उस्तो हो । तर जे भन्छु देखेको भन्छु, भोगेको भन्छु अनि गरेको भन्छु । यो लेख्दै जाँदा पक्कै पनि मेरा हातले रोक्किने बाहाना खोज्लान् तर म सत्य...
विचित्रको छ समाज । कसैलाई धनको लोभ छ । कसैलाई पदको लोभ छ । कसैलाई अर्नौठौ सोख छ । म नजिक बसेर हेरिरहेको छु । कसैले मलाई माया गर्छन्, कसैले घृणा गर्छन्, कसैले सल्लाह...
काठमाडाैं । साहित्यकार तथा व्यवसायी वसन्त चौधरीको ‘अनेक पल और मे’ काव्यसंग्रह र ‘तिमी बिनाको म’ कवितासंग्रह सार्वजनिक भएको छ । मंगलबार काठमाडौंको कमलादीमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच चौधरीका दुई काव्यसंग्रह लोकार्पण भएको हो ।...
२०७८ मंसिर ७ गते १२:१२ गोपाल खनाल
ए ! जिन्दगी यो हार कतिन्जेल चल्छ ? खै घाटाको व्यापार कतिन्जेल चल्छ ?? दुःख छ, पीडा छ, अभावले बेचैन मन सोध्छौ आँखा असार कतिन्जेल चल्छ ?? सोच्नुस् त गाउँका सबै उतै फर्किए भने...
काठमाडौं । वरिष्ठ समाजसेवी शान्तलाल मुल्मीको मभित्रको म पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रका अभियन्ता एवम समाजसेवाका अग्रणी मुल्मीको आत्मवृत्तान्त पूर्व प्रधानन्यायधिस कल्याण श्रेष्ठ, भाषासेवी मल्ल के सुन्दर, मानवअधिकारकर्मी प्रा.कपिल श्रेष्ठ, साहित्यकार...
२०७८ कार्तिक २३ गते ११:३५ विकासन्युज
काठमाडौं । आइएमईको वर्ड भ्रमण विथ साइग्रेसको सुरु भएको छ । नेपालका सात वटै प्रदेशका मुख्यमुख्य शहरहरूमा गरिने उक्त कार्यक्रम आजबाट सुरु भएको हो । सो कार्यक्रम मङ्सिर १७ सम्म संचालन हुनेछ । वर्ड भ्रमणमा...
२०७८ असोज ३ गते ११:५९ सुशिल घिमिरे ‘त्रैलोक्य’
सानै पोस्टको सरकारी जागिर खाएपनि आमाले मलाई सानोमा हुर्काउन धेरै दुःख गर्नुभयो । आफ्ना रहर र खुसीहरु बिर्सिएर एक्लो छोरालाई नै हेरेर चित्त बुझाउनु भयो । छोराकै खुसीमा आफनो खुसी देख्नुभयो । आमाले मेरो लागि...
पोखरा । नेपाली कांग्रेस पूर्व महामन्त्री एवम् पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटले नेपाली काङ्ग्रेसमा रूपान्तरण अपरिहार्य भइसकेको बताएका छन् । कांग्रेसमा २००७ र २०४६ सालको जस्तो ऊर्जा कायम राख्नका लागि सुवर्ण शमशेर र गणेशमानका जस्तो...
काठमाडौं । साहित्यकार एवं पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वराजदूत भोजराज घिमिरेको उपन्यास ‘इन्द्रमाया’ सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार भर्चुअल माध्यम जुमबाट उक्त उपन्यास विमोचन गरिएको हो । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् ।...
२०७८ साउन १४ गते १२:५० सुशिल घिमिरे “त्रैलोक्य”
आफ्नै हुन् भनो यस्सो फकायो ठुस्स पर्छन् ए आइदेओन भनो मान्दैनन् खाइदेओन भनो मान्दैनन् आफ्नैले धोका दिँदा छिमेकी गुहार्नै परो यताका बटुलो उताका बटुलो मलाई अलि धेरै चाहियो भन्दिछन् मलाई अलि राम्रो चाहियो भन्दिन्छन्...
प्रिय मित्र नमस्कार, यो हप्ता नेपाली छापा, डिजिटल अनलाइन खबरहरु र रेडियो तथा टेलिभिजनहरुमा तिम्रै सर्वाधिक चर्चा सुनियो । तिमीले दलित भएर कोठा नपाएको खबरहरु बारम्बार सुनियो । तिमी छाइरह्यौं यो हप्ता नेपाली मिडियामा,...
२०७८ असार ८ गते २०:०३ गोपाल खनाल
महोदय ! उमङ्ग साँचेर सुने, पढेँ राष्ट्रको नाममा भनिएको सम्बोधन तर अनुत्तरित रहे थुप्रै प्रश्नहरु आफैँसँग ।। बेला बेला फरक ढाँचामा सुनिन्छन् सम्बोधनहरु जब समेट्नै पर्ने विषय छुट्छन् त्यो व्यर्थ बन्दैन र ? हुन...